N'ogbe Sunnydaze Rolling Ogige Ugbo ala nwere ike ịgbatị ụgbọ ala, oche swivel, nkata na tray. Ndị na-emepụta na ndị na-eweta ngwaahịa | ABC
Ná ngwụsị izu anyị niile na-enwe mmasị ịrụzi ogige nke aka anyị. Ma mgbe ị na-edozi ahịhịa ahụ, ike agaghị agwụ gị ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ squat na ọrụ? Cartgbọ ala ogige Achọrọ m ịme ka ị mata n'okpuru nwere ike idozi nsogbu nke ọrụ squatting maka gị ma mee ka ị nwekwuo ahụ iru ala na ọrụ. Sunnydaze Rolling Ogige Ugbo ala nke nwere ike ijikwa oche ụgbọ ala, oche swivel, nkata na tray. Nha ya (W × D × H) bụ 870 * 440 * 490 mm, ụgbụ dị arọ bụ 14,5 n'arọ, ikike ibu bụ 150 n'arọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile nwere ike ịnọdụ ala ma rụọ ọrụ na ya. N'ime ọrụ ubi, ngwá ọrụ anyị na trolleys ga-enwerịrị ike ịmị mmiri, mana a na-eji ígwè nwere uzuzu a kpụkọrọ ụgbọ ala a, nke na-agaghị ata nchara nfe.
1. Ogige Rolling ọrụ oche cart na a ogologo ahụ nwere ike wetara dị ka a wagon, nke bụ nnọọ adabara ubi ọrụ, na-arụzi ụgbọala oru, na ụlọ ọrụ ndị dị n'ụlọ.
2. E nwere oghere mmiri mgbodo na tray nchekwa. Ọ na-adị mma ma na-eku ume ịnọdụ ala na-arụ ọrụ n'oge ọkọchị.
3. Onweghị ebe dị nkọ, yabụ echegbula onwe gị maka ịkọ gị.
4. Ejiri 10 "nnukwu pneumatic wuru maka ịgbagharị dị mfe.
5. Mgbe ị na-arụ ọrụ, ịnwere ike itinye ngwaọrụ ndị dị na tray n'okpuru oche, na-eme ka ngwaọrụ dị nso, nkata ịba uru maka nchekwa ọzọ.
6. 360 Celsius oche na-agbanwe agbanwe na ịrụ ọrụ ndozi dị elu dị elu.
Ezubere ụgbọ ala a na-agbagharị agbagọ ka ọrụ ubi wee bụrụ ihe na-egbu mgbu site na iwepụ nsogbu ikpere na azụ gị. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, biko kpọtụrụ m maka ọnụahịa nkwado. Ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju na ya ma ọ bụ na ọ bụghị ụdị ị chọrọ, ị nwere ike lelee ngwaahịa ụgbọ ala ndị ọzọ dị na weebụsaịtị anyị, ma ọ bụ kpọtụrụ m ozugbo, aga m akwado gị ngwaahịa ụgbọ ala ndị ọzọ.
Nke gara aga: ABCTOOLS Durable Nchekwa Utility Fkpakọ Beach Wagon
Osote: 3 na 1 nke a na-agbanwe agbanwe nke a na-agbanwe agbanwe nke aluminom na-agbanye aka na wiilị
Ogwe osisi ugbo anọ
ugbo ala na oche
ugbo ala na wheel
ubi Rolling ụgbọ
ubi trolley ụgbọ
Sunnydaze inyefe ugbo ala
ABCTOOLS Inogide Nchekwa Utility ịkpakọba B ...
3 Egbe elu Nchekwa Mobile Cart 4 Wheels Racking Fo ...
Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Ime ụlọ ime ụlọ Obere Nchekwa Obere Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo Shelf maka ulo Ogbe shelf